Fotodrafitrasa eto Antananarivo: hanatsara ny fifamoivoizana ny tetikasa lalana Rocade | NewsMada
Fotodrafitrasa eto Antananarivo: hanatsara ny fifamoivoizana ny tetikasa lalana Rocade
Tetikasa goavana eto Antananarivo ny Rocade, hanatsara indrindra ny fifamoivoizana manerana ny tanàna, vahaolana iray hialana amin’ny fitohanana maharitra mampikatso ny toekarena sy ny manodidina. Kely sisa dia ho vita izany lalana izany.
“Akaiky ho vita ny tetikasa fanamboaran-dalana Rocade, efa nandrasana eto Antananarivo hatry ny ela. Hanatsara sy hanova ny fifamoivoizana eto an-dRenivohitra izany, ary tetikasa mendrika hoderaina ifandraisan’i Frantsa sy i Madagasikara”, hoy ny masoivoho frantsay, i Christophe Bouchard, nijery ny fandehan’ny asa eny Andranobevava, ny 6 avrily teo. Niaraka aminy ny minisitry ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy (MaTP), Andrianainarivelo Hajo, ny solontenan’ny Vondrona eoropeanina (UE) sy ny AFD.
8,21 km ny halavan’izany lalana izany, tohanan’ny BEI, UE ary ny AFD. Miala avy eo amin’ny Boulevard de Tokyo By Pass hatrany Andranobevava, mandalo Ambohimahitsy sy Nanisana, Ankadindramamy. Ahitana tetezana roa.Betsaka ny fanajariana natao, toy ny fanotofana tany sy fanatevenana ny lalana amin’ny tara. Vita hatrany amin’ny 92% izao ny asa, heverina hisokatra amin’ny volana jona 2021 ho avy izao, raha tsara ny toetr’andro sy ny lafiny fahasalamana.
Omena onitra ireo tompon-tany
Fantatra fa efa nahazo onitrta ny 97% amin’ireo trano tsy vita soratra ara-dalàna (615 amin’ireo olona 635). Mbola eo am-panadihadiana ny ambiny ny ao amin’ny minisitera (MaTP) sy ny Tahirimbolam-panjakana. 27 % monja amin’ireo ny tany vita soratra, misy 738 ny tompony, ny efa nahazo onitra. Mbola eo am-panadihadiana ny vahaolana hanomezana onitra ny tompon-tany ny MaTP sy ny minisiteran’ny Toekarena sy ny tetibola.
Manohana ireo tompon-tany amina tetikasa maro ny fanamboaran-dalana Rocade. Napetraka ny “guichet unique” manampy sy manoro lalana ny tokony hatao amin’izany.
Challenge Airtel Mandresy: les revendeurs de carte Sim primés 20/04/2021
Eco brèves 20/04/2021